Ethuswe wukukhohlela ilume yabulala ingane | News24
Ethuswe wukukhohlela ilume yabulala ingane
San Diego - Inja eyayilele nezithandani zaseSan Diego, eCalifornia embhedeni nengane yomfana yathuswa ngumama wengane yangenela ingane ngezinyo yaze yashona ngoLwesihlanu, kusho amaphoyisa.
Abazali bengane babebuka ithelevishini ngesikhathi sesigameko nenja yabo enkulu yohlobo lwe-American Staffordshire terrier-Great Dane nengane yabo enezinsuku ezintathu izelwe, kusho uSergeant Tu Nguyen wamaphoyisa aseSan Diego.
OLUNYE UDABA: Kushone indoda elume inja
"Lo mama wakhohlela kungazelele wathusa inja yaluma ingane yalimala kanzima," kusho uNguyen.
"Abazali bakwazi ukuhlukanisa inja nengane bayiphuthumisa esibhedlela kodwa ngeshwa ayisindanga," usho njalo.
Inja ithathwe ngabakwaSan Diego County Animal Service, kusho isiphathimandla.